admin, Author at Galmada.net - Page 2 of 104
Daawo Mucjio:- Ilmo bil dhallan oo ay 7 illig usoo baxeen!
Daawo Mucjio:- Ilmo bil dhallan oo ay 7 illig usoo baxeen! Dhaqaatiir ku sugan gobolka Gujurat ee dalka Hindiya ayaa 7 ilkood ka bixiyay ilmo yar oo bil uun dhallan. Sida ay kusoo waramayso wariyaheena Hindiya Sushila Singh, waalidka ilmahan dhalay ayaa dhaqtarka geeyay kadib markii ay hooyadiis dhibaato kala kulantay marka uu naaska […]
sheeko cajiib ah: Markab Nooca dalxiiska ah ayaa waxa saarnaa nin professor ah, waxana isaga oo badda eegaya soo Ag Istaagay mid ka mid ah shaqaalaha markabka ee qaybta makaanikada ah Ninkaas oo dhar wasakh ah xidhnaa. Professorkii waxa uu ninkii makaaniga ahaa ku yidhi isaga oo Xaqiraya “ Wax ma Baratay Oo Magacaaga ma […]
Fanaanada xanan Washington oo ka mid ah fanaaninta ku nool magaalada ayaa soo qaaday hees qeeybo badann oo jirkeeda ah aay qaawan yahay. Fanaanada ayaa ku heyseysa saraawuisha raga aay xeertaan iyo garan waxaana la arkaa Cawrada Jirkeeda oo Qaawan . HALKAN RIIX OO DAAWO DAAWO: Xanaan Washington Oo Noqotay Fanaanada Ugo Anshaxa Xun Fanaaninta […]
Aqoonyahan Shaqo Waayay
Haayad deggan mid ka mid ah waddanada Qaaradda Afrika ayaa maalin iclaamisay in ay doonayso qof shaqaale ah. Waxaana waraaqihii shaqada lagu codsanayay soo xareystay dad aad u tiro badan. Dadkii si loo kala saaro waxa laga qaaday imtixaan. Markii uu dhamaaday na waxa la sheegay qofkii imtixaanka ku guuleystay, waxaana uu ahaa nin aad […]
Daawo: Qubnaha VOA oo Qodobo Xiiso Leh lagu soo qaatay iyo Soomaalida oo Minnesota Suuq ka dhisanaysa
Daawo: Qubnaha VOA oo Qodobo Xiiso Leh lagu soo qaatay iyo Soomaalida oo Minnesota Suuq ka dhisanaysa Waxaanu Halkan idiinku soo gudbinaynaa Barnaamijka Qubanaha VOA Waxaana soo Jeedinaya Falastiin Axmed iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwali. HALKAN KA DAAWO VIDEO Barnaamijka waxaa lagu soo qaatay Gobolka Texas ee dalka Maraykanka oo Xaalad adag ka taagan […]
voa Ethiopia oo Xaqiijisay in Loo soo Dhiibay Qalbi-Dhagax
Waxa uusan shaki ku jirin in Ibta labada naas iyo mantiqada ku hareersan ee midibkoodu yahay (Pink Iyo Brown-ka) in ay yihiin goobaha ugu dareenka badan naasaha ,balse waxaa qalad ah in goobahas la kiciyo ka hor inta aan la soo bisleyn jirka intiisa kale . Iyadoo la eegayo aqoonta ama fanka galmada waxaa ninyahoow […]
Inta Ay Nooshahay Magacaada Ayay Xuseysaa Hadaad Baashaalka Noocaan U Sameyso
Marka aad dareento in aad u baahan tahay in aad kulan ciyaareedka la qaadato lamaantaada ninyahoow horay ha ugula deg degin in aan ka dalbato in aad ciyaarta bilaawdaan , waxaa suura gal ah in lamaantaada aysan nafsiyan diyaar u aheyn . Hadaba doorkaada ayaa la joogaa ninyahoow in aad xariif iska dhigto talabaadaan samee […]
Waa Maxay Guurka Qudbo Sirada
Waa Maxay Guurka Qudbo Sirada Qisadaan oo dhacday Bilooyin kahor ayaa Shabakada Caalamigaa ee Aduun.com Xafiiskiisa warqabadka ee Magaalada Nairobi lasoo gaarsiiyey Dhanbaal murugo badan oo ka turjumaya Mowduuca aad barta sare ka aragtid. Guurka qudba sirada oo ah Fariin aanan lagu farxin ayaa bulshadeena barkeeday noqotay wax iska caadi ah iyadoo hada awlaad badan […]
Hadaan rabo inaan mehersado garoob ma waxaa laiga rabaa inaan waalidkeeda la socodsiiyo oo ka doono? Hadaan shiikh utago oo u sheego in ay horay guur u soo martay, ma wuxuu igu xujeen WALIGEEDA? In aynu isku ceeb asturno beynu rabnaa oo xaaraanta kaga dheeraano sidaasi, isla markaasna cidina loo sheegin meherka labadeena inaga […]
Markaan Leenahay dumarka xiligaan jooga waxaan ka wadanaa dumarka waqtigaan aduunka jooga qaasatan kuwa dhalinyarada ah kuwa jiraan haweynka waa weyn waayo qarni walba waxaa soo baxa dumarka kuwii hore ka duwan waxaan hada la oran karaa dumarka hada jooga waa kuwii ugu il baxsan dumarkii hore ee aduunka soo maray taas waa fikrada xogcusub […]
Iska Hilmaam Emraan Hashmi: Varun Dhawan Oo Kamid Noqday Xidigaha Sida Rasmiga Ah U Sameeya Baasho Ama Shumis Afka Ah
Fariidka Bollywoodka waa soo laabtay wuxuuna markaan la yimid door laba waji uu ku matalaayo waana filimka Judwaa 2 kaaso qeybtiisa hore la daawaday 90kii uuna Salman Khan hogaamineyay. Hadaba sida caadada ah shumisa is baasheynta ah waxaa caan ku ahaa 90kii Super Star Akshay kumar balse qarnigaan cusub dhanka shaxaarnimada waa laga fariisiyay. Kadib […]
Hooyo Soomaaliyeed oo Ninkeedii ku Dilay Dalka Ingiriiska (Dhegayso VOA)
Aasiya Cumar oo aheyd hooyo Soomaaliyeed oo dhalinyara ah ayaa Isniinti lagu dilay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska, kadib marki uu toorreeyay seygeeda oo lagu magacaabo Aden Dahir. HALKAN dhegayso WARAYSI Wariyaha VOA-da ee London , Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa dilkan ka waraystay Ayaan Cabdulaahi Macalin oo ku sugan magaalada Bristol, qaraabo dhowna ay yihiin […]